MPT ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - MyMTV Service နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်
ဤစာမျက်နှာသည် နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်(“ပရိုမိုးရှင်း”)တွင်ပါဝင်ကံစမ်းသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များအားရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ပရိုမိုးရှင်းအား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊ “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ရယူနိုင်ပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းကို Contents Hub Co., Ltd. က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်ကံစမ်းခြင်းဖြင့်သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟုခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါသည်။
၁.၁ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပရိုမိုးရှင်းကို Contents HubCo., Ltd. က အပြည့်အဝ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းများ သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ်များကိုမဆို Contents Hub Co., Ltd သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းတွင် MPT ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတိုင်းအတာသည် အောက်တွင်ထပ်မံရှင်းလင်းဖော်ပြမည့် ကျသင့်ငွေကောက်ခံခြင်း (Billing) နှင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်း (Subscription) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
၁.၂ စည်းကမ်းချက်များတွင် သင့်အား အတိအလင်းအပ်နှင်းထားခြင်းမရှိသည့် အခွင့်အရေးအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့က သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများက သီးသန့် ရယူထိန်း သိမ်းထားပါသည်။သင်အနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းသာ ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပြီး အခြားသောအသုံးပြုခံစားမှုအားလုံးကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ် ထားပါသည်။
၁.၃ MPT သည် MPT ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သင်၏ ပရိုမိုးရှင်းသို့ ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ပါဝင်ကံစမ်းမှုကို အကြောင်းကြားမှုနှင့် တာဝန်မရှိဘဲ အမြဲတမ်းသော်လည်းကောင်း၊ ယာယီသော်လည်းကောင်း ရပ်စဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းပယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည့်အခါတွင်စည်းကမ်းချက်များသည် ဤတွင်ဖော်ပြထားသော ဆက်လက်တည်ရှိနေမည့်စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သော အတိုင်းအတာအထိ သင်အပေါ် ဆက်လက်စည်းနှောင်မှုရှိရမည်။
၁.၄ ပရိုမိုးရှင်းတွင် သင်၏ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောနှင့် ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိ သော ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်းများပေါ်မူတည်နိုင်သည်။ ပရိုမိုးရှင်း၏ အဆက်ပြတ်ခြင်း၊(စီစဉ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ စီစဉ်မထားဘဲဖြစ်စေ) ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းသို့မဟုတ် မဝင်ရောက်နိုင် ခြင်းတစ်ခုခုအတွက် MPT သည် သင့်အပေါ် သို့မဟုတ် မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်သည်ကို သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။
၁.၅ သင်၏ ပရိုမိုးရှင်းအသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ သင်၏ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် မည် သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်မဆို သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်၏ အခြားဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုအတွက် MPT တွင် တာဝန် မရှိစေရ။
Contents HubCo., Ltd.သို့မဟုတ်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှအခြားနည်းဖြင့် တရားသဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှလွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဤ ပရိုမိုးရှင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့် အကြောင်းအရာ အပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာ မဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) MPT ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက် တစ်ခုခုနှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဥာဏပစ္စည်းအခွင့်အရေးများအားလုံးမှာ MPT နှင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသောအကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများ၏ သီးသန့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်မှလွဲ၍ပရိုမိုးရှင်း၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဥာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများတစ်ခုခုတွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသော အသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန်တီးသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ Promotion တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊ အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများမြင်သာစေရန်ပြသခြင်း၊ လူအများမြင်သာစေရန်ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော်သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် မပြုလုပ်ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှ အတိအလင်းခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အကြောင်းအရာအားအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
၃.၁ ပရိုမိုးရှင်းကာလသည် ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့မှ၂၀၁၉မတ်လ (၂၅) ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါသည်။
၃.၂ ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် သင်အနေဖြင့် MyMTVဝန်ဆောင်မှုကိုပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း စာရင်းပေးသုံးစွဲရမည်။
၄.၁ ဤပရိုမိုးရှင်းကို အနည်ဆုံး အသက်တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်(၁၆)နှစ်နှင့် အထက်ရှိပြီး (MPT SIM အသုံးပြု နေသည့်) မှတ်ပုံတင်ထားသော MPT သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
၄.၂ MPTနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊မပတ်သက်သည်ဖြစ်စေMPT အတွက်လုပ်ကိုင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ်MPT၏ ဝန်ထမ်းများ(မိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးများ အပါအ၀င်)ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ကံစမ်းခွင့်မရှိပါ။
၇.၁ ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းမှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်)နှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဤနေရာ၌ “ရှိသည့်အတိုင်း”နှင့်“ရှိနိုင် မည့်အတိုင်း” ရနိုင်သောစနစ်ဖြင့်ပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။ MPT သည်ပရိုမိုးရှင်းလည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းမှတဆင့် အခြားနည်းဖြင့်သင်အသုံးပြု နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော၎င်း၏တိကျမှုအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက် အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သော အတိအလင်းဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်စားပြုတင်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် အာမခံချက်များမပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ ပရိုမိုးရှင်းအသုံးပြုမှုသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ကို မိမိဘာသာတာဝန်ယူသည်ဟု အတိအလင်းသဘောတူပါသည်။
၇.၂ MPTသည်ပရိုမိုးရှင်းအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်းမှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော၊ ဆက်စပ်၍ဖြစ်သော၊ ပြစ်ဒဏ်အရဖြစ်သော နှင့်/သို့မဟုတ် အကျိုးဆက် အားဖြင့်ဖြစ်သော နစ်နာမှုများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသော နစ်နာမှုတစ်စုံတစ်ရာအတွက် တာဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၇.၃ သင်အနေဖြင့်ပရိုမိုးရှင်းသို့ ဝင်ရောက်ကံစမ်းရာတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ဆက်စပ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်အရဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့်သဘောသဘာဝ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားမဆိုရှိသည့် ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှု၊ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပေးရန်တာဝန်ရှိမှုနှင့် အကျိုးဆက်များ တစ်ခုခုနှင့်အားလုံးမှ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ကိုထိုသို့ဖြစ်နိုင်ခြေအား အသိပေးပြီးသည့်တိုင်ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ကံစမ်းစဉ်အတွင်း သို့မဟုတ် ကံထူးဆုအား အသုံးပြုခံစားခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သော မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ထိခိုက်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟု မကန့်သတ်လျက်၎င်းတို့မှသော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာသောနှင့် ၎င်းတို့ကိုအကြောင်းပြုသော တောင်းခံမှုများ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ အခွင့်အရေးများ၊ တရားစွဲဆိုရန် အကြောင်းတို့မှ MPT အားကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ရာသက်ပန် လွတ်ငြိမ်းစေရန် သဘောတူညီပါသည်။
၇.၄ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများမှ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုင်းအတာအလျောက် MPT သည် ရည်ရွယ် ချက်တစ်ခုအတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရောင်းချနိုင်စွမ်း၏ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အာမခံချက်များအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသောအတိအလင်းဖော်ပြထားသည့်သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့် အာမခံချက်များအားလုံးကို မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုပါသည်။
၇.၅ ပရိုမိုးရှင်းတွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းမှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ်အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများတွင် MPT ဆာဗာများ သို့မဟုတ် MPT မှ ပို့သောအီလက်ထရောက်နစ် ဆက်သွယ်မှုများသည် ဗိုင်းရပ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ ကင်းလွတ်ပါသည်ဟု MPT က အာမခံခြင်း မပြုပါ။
ပရိုမိုးရှင်းတွင် Contents Hub Co., Ltd.အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပံ့ပိုးပေး ထားသောအကြောင်းအရာ(တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ)တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာသို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်သောချိတ်ဆက်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုအတွက်MPTတွင်တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏သတင်းအချက်အလက်၊ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုခုအား ရည်ညွှန်းချက်သည် MPT က ထောက်ခံမှု၊ ကမကထပြုမှု သို့မဟုတ် အကြံပြုမှု မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ထိုသို့သွယ်ဝိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
MyMTV နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
၂။ မှတ်ပုံတင်ထားသောMPTအသုံးပြုသူများ (MPT ဆင်းမ်ကဒ်အသုံးပြုသူ)၊ အနည်းဆုံး အသက် တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်ပြည့်ပြီးသောမြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်MyMTV၀န်ဆောင်မှုကိုရယူထားသောသူများ(အသစ်/အဟောင်း)သည်ဤအထူးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၃။ အသုံးပြုသည်ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ၀န်ဆောင်မှုအား အနည်းဆုံး (၅)ကြိမ် အောင်မြင်စွာ ပေးချေထားရမည် ဖြစ်ပြီး ဆုရွေးချယ်သည့် အချိန်တွင် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ရမည်။
၄။ ပရိုမိုးရှင်းကာလသည် ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့မှ၂၀၁၉မတ်လ (၂၅) ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းကာလဖြစ်သည်။
- ရွှေ (၁)ကျပ်သားဆု (၃) ဆု
- MPT ငွေဖြည့်ကဒ်(၃၀၀၀) ကျပ်တန် (၁၅၀)ဆု
၆။ ကံထူးသူများအား ၂၀၁၉ ဧပြီလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ဆုကိုလာရောက်ထုတ်ယူရန်၊ သက်ဆိုင်ရာကြေငြာမှုပြုလုပ်သောနေ့ရက်မှစ၍ တစ်လအတွင်း မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်လူကိုယ်တိုင် MPT ရုံးချုပ်သို့ လာရောက်ထုတ်ယူရပါမည်။အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိလျှင်ဆုကိုအခြားအကျုံးဝင်သင့်လျော်သောပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူကို ပေးအပ်မည် ဖြစ်သည်။
၉။ ဆုအမျိုးအစားများနှင့်ကံစမ်းမဲပေါက်သူများကိုရွေးချယ်ရန်အပါအ၀င်ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ပတ်သတ် သောမည်သည့်အခြေအနေကိုမဆိုContents Hub Co., Ltd. နှင့် MPT တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကသာနောက်ဆုံးအတည်ဖြစ်သည်။နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုများ၊စုံစမ်းမှုများနှင့် အပေးအယူများကိုပြုလုပ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
၁၀။ ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ပတ်သတ်၍အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင် ၀၉-၂၅၈၅၃၉၉၅၅သို့မဟုတ် ၀၉၂၅၈၅၃၉၉၆၆ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
MPT Terms and Conditions –MyMTVService New Year Promotion
This page explains the terms by which you agree to abide by when participating in the “New Year Promotion” (“Promotion”). The Promotion can be accessed through services provided by Myanma Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”). The Promotion is operated by and provided to you byContents HubCo.,Ltd.By participating in the Promotion, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions andany other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
1.1 As mentioned above, the Promotion is fully operated by Contents HubCo.,Ltd. The scope of MPT’s involvement with the Promotion is limited to billing and subscription functions only, which will be further explained below.
Except as otherwise rightfully operated by Contents Hub Co.,Ltd.or any other third party, as applicable, any MPT proprietary material related to the Promotion, including, without limitation, software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, videos, music, and content (collectively, “Content”), and all intellectual property rights related thereto, are the exclusive property of MPT and its licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. Except as explicitly provided herein, nothing in the Terms shall be deemed to createalicense or right in or under any such intellectual property rights, and you agree not to sell, license, rent, modify, distribute, copy, reproduce, reverse engineer, transmit, publicly display, publicly perform, publish, adapt, edit or create derivative works from any materials or Content accessible on the Promotion. Use of the Content for any purpose not expressly permitted by the Terms is strictly prohibited.
3.1 The Promotion period is from26thDecember2018 to 25thMarch2019 (“Promotion Period”).
3.2 In order to participate in the Promotion, you must subscribe to the MyMTV service during the Promotion Period.
The Promotion may aggregate content obtained or provided by third parties, including Contents Hub Co.,Ltd. (“Third Party Content”). As such, MPT is not responsible for such Third Party Content or any linked websites associated with Third Party Content. Reference to any information, products or services of third parties does not constitute or imply endorsement, sponsorship or recommendation by MPT.
MyMTV New Year Promotion Terms and Conditions
1. Users can subscribe to the MyMTVservice using their MPT phone numbers.
2. MPT registered users (using an MPT SIM) who are Myanmar citizens, at least 16 years old, and are MyMTVsubscribers (new/existing)can participate in the Promotion.
3. To be eligible, users have to successfully pay for the service at least5times within Promotion Period and must be an active user at the time of winner selection.
4. The Promotion period is from 26thDecember 2018 to 25thMarch2019 (“Promotion Period”).
• Gold 1 Tical(3pc)
• 3,000Ks MPT Top-up Card (150pcs)
6. Winners will be announcingon 10th April 2019.
9. Contents Hub Co. Ltd and MPT’s decision in relation to every aspect of the Promotion including but not limited to the type of Prize and the selection of winner shall be deemed final and conclusive under any circumstance. No further appeal, enquiry and/or correspondence will be entertained.
10. You may contact 09258539955 and 09258539966 for detailed information about the Promotion.